Ny sabotsy 28 sy ny alahady 29 jolay lasa teo no nanatontosana izany tany an-toerana ka teo amoron-dranomasina manoloana ny Auximad avokoa no nanatanterahana ny lanonana rehetra. Mpifankatia, fianakaviana, mpinamana… no tonga nanatrika ny hetsika izay nosantarina tamin’ny alalan’ny tandaha-piara sy môtô nitety tanàna. Nitohy tamin’ny karaoke sy kilalao maro samihafa ny lanonana, anisan’ireny ilay fifaninanana hatsaran-tarehy ho an’ny lehilahy sy ny vehivavy izay nisy mpandray anjara marobe tokoa. I Laura sy Jasmin no nibata ny amboara izay nahazo vola 200.000 Ar avy. Anisan’ny nanao ny fanentanana nandritra ny hetsika i Andry Barhone sy ry Fou hehy. Nanome aina ny fampisehoana kosa i Welwi Waves, Joudas, Big MJ. Nofaranan’ny orinasa Star tamin’ny fanadiovana ny tanàna ny hetsika.